Semalt विशेषज्ञ: कसरी साझेदारी योग्य ट्विटर चित्रहरू सिर्जना गर्ने?
के ट्वीट तस्बिरहरूले वास्तवमा एकलाई बढि फॉलोअर्सहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ? के यो सत्य हो कि तिनीहरू अधिक लाइक, रिट्वीट, र उल्लेखहरूमा पनि रिल गर्छन्? अवश्य पनि, तिनीहरू गर्छन्। त्यहाँ संख्याहरू छन् जुन यसका लागि निश्चित छन्, ट्वीट pics काम गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ एक क्याच छ: pics को साझा योग्य हुनु पर्छ।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक फ्रान्क Abagnale, यहाँ ट्विटर मा साझा योग्य चित्रहरु को लागी बनाउने सुझावहरु वर्णन गर्दछ।
यहाँ चार केस पोइन्टहरू छन् जुन ट्वीट चित्रहरूको प्रभाव देखाउँदछ।
बफर एपले उनीहरूको ट्विटर खातालाई नोभेम्बर, २०१ in मा केहि समयको लागि अवलोकन गर्‍यो। उनीहरूले पत्ता लगाएको कुराले परिचित ढाँचा प्रकट गर्‍यो। चित्रका साथ ट्वीटहरू १%% बढी क्लिकहरू र १ %०% बढी रिट्वीस तस्वीरहरू बिनाका भन्दा प्राप्त भयो।
ट्विटरले अधिक कारकहरू पत्ता लगाए जसले कारकहरू रिट्वीटमा योगदान पुर्‍यायो र कुन कारक सूचीको शीर्षमा बसे भनेर अनुमान लगायो? निस्सन्देह, तपाईंले अपेक्षा गरे जस्तो, यो फोटोहरू थियो। फोटो सहितको ट्वीटमा Tweets% बूस्ट, भिडियोहरू (२ 28%), उद्धरण (१%%), ती संख्या (१ 17%) भएका जबकि ह्यासट्यागको साथ १ 16% बढावा थियो। नोट गर्नुहोस् कि तपाई अधिक रिट्वीटको लागि फोटो र उद्धरणहरू म्यास गर्न सक्नुहुनेछ।
सोटरन्डर ब्लगले ट्विटरमा most०० सबैभन्दा अनुसरण गरिएको ब्रान्डको विश्लेषण गर्‍यो। तिनीहरूको जोडले कसरी pic.twitter.com, vines, Instagram, Facebook र twitpic.com लि links्कमा प्रभाव पारेको छ भनेर निर्धारण गर्दै थियो। Vines र twitpic.com लिंकको थोरै प्रभाव भए जबकि फोटो र pic.twitter.com को साथमा १ 14१% बढी रिट्वीट थियो। अर्कोतर्फ फेसबुक / इन्स्टाग्राम लि with्क भएका व्यक्तिहरूले क्रमशः १२२% र%%% बढी रिट्वीट प्राप्त गरे।
एक पटक डान जारेलाले k००k ट्वीट (अनियमित रूपमा छनौट गरिएको) विश्लेषण गर्नका लागि रिट्वीटरमा ट्विटरको भिजुअलहरूको प्रभावको आकलन गर्न समय लिए। विश्लेषण पछि उनको निष्कर्ष? तस्वीरका साथ ट्वीट्समा रिट्वीट हुने of%% मौका थियो।
आकार? कुन आकारको?
विज्ञहरूका अनुसार त्यहाँ ट्वीट पिकिक्सको आदर्श आकार जान्नु आवश्यक छ। डेस्कटप स्क्रिनमा, एक टाइमलाइनमा सबै छविहरू 6०6 र २33 pxs (पिक्सेल) हुन्। यसको पक्ष अनुपात २: १ हो। यदि फोटो दायरा भित्र पर्दैन (भन्नुहोस् कि यो माथि जान्छ), तब यो पूर्वनिर्धारित द्वारा क्रप गरिएको छ। जहाँसम्म जब कोही छवि मा क्लिक गर्दछ, तब ऊ / उनी सबै कुरा देख्छन्।
साझेदारी योग्य ट्वीट तस्बिरहरू सिर्जना गर्दै
१. वाटरमार्क गर्नुहोस् - यसको लागि पाब्लो (नि: शुल्क उपकरण) प्रयोग गर्नुहोस्। एउटा उद्धरण, प्रश्न वा केवल एक हेडलाईनको सुन्दर छवि सिर्जना गरेर सुरू गर्नुहोस्। भगवान पृष्ठभूमि फोटोको साथ बन्द गर्नुहोस्।
२. तपाईको इन्स्टाग्राम र फेसबुक फोटोहरू साझेदारी गर्नुहोस्। यदि यी प्लेटफर्महरूमा तपाइँका अनुयायीहरूले तिनीहरूलाई माया गर्थे भने, तब तपाइँका ट्वीपहरूले पनि तिनीहरूलाई मनपर्नेछ।
चित्रको कोलाज सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं तीन वा चार तस्विरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कुनै प्रकारको कथा बताउन। यो सँधै चमत्कार गर्दछ।
Tag. ट्याग। ट्याग ट्याग सबै सामाजिक मिडिया नेटवर्कको रूपमा, ट्विटरले तपाईंलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको फाइदा लिन ट्याग गर्न अनुमति दिन्छ।
An. एनिमेटेड GIFs कोसिस गर्नुहोस्। GIF हरू तपाईंको टाइमलाइनमा अनुपम सामग्री थप्नको लागि उत्तम तरीका हुन सक्छ। नोट गर्नुहोस् कि ट्विटर GIFs मा स्वचालित रूपमा खेलदैन। प्रयोगकर्ताले पहिले प्ले बटनमा क्लिक गर्नुपर्दछ।